Dhaqanka Finnishka - InfoFinland
Nolosha Finland > Shaqo iyo ganacsi > Dhaqanka Finnishka
Finland waxaa aad looga qadariyaa daacadnimada, ku imaanshaha waqtiga iyo sinnaanta. Kani waxaa lagu arkaa dhammaan dhaqamada Finnishka, xittaa noloshada shaqada. Boggan waxaa lagu sheegayaa dhaqanka shaqada Finnishka.
Sharciyada iyo heshiisyada nolosha shaqada
Nolosha shaqada ee Finnishka waxaa ku jira xeerar badan, kuwaas oo ay qasab tahay in shaqaalaha iyo shaqo-bixiyuhuba ay u hoggaansamaan. Sharciga degsan iyo heshiiska shuruudaha shaqada ayaa qeexaya tusaale ahaan mushaarka ugu hooseeya, wakhtiyada shaqada, fasaxyada, mushaaraadka wakhtiga jirrada iyo shuruudaha ruqsaynta ama shaqo ka eryidda.
Shaqo-bixiyuhu wuxuu mararka qaar shaqaalaha ka codsan karaa in uu qabto shaqo dheeraad ah. Sida u sharcigu qabo, shaqo-bixiyuhu waa in uu mushaar la kordhiyay ka bixiyaa shaqada dheeraadka ah. Magdhow ahaan waxaad sidoo kale u helaa kartaa fasax. Xaq ayaad u leedahay in aad diiddo shaqada dheeraadka ah.
Macluumaadka xuquuqda iyo waajibaadka shaqaalaha ee Finland waxaad ka heleysaa bogagga InfoFinland Xuquuqda iyo waajibaadka shaqaalaha.
Baro Finnish ama Iswidhish
Inkastoo afka Ingiriis si iska fiican looga yaqaan Finland, aqoonta afka Finnishka ama Iswidhishka ayaa adiga kaaga faa’iido badan. Aqoontaada luqadeed waxaad ku horumarin kartaa dhigashada koorasyada ama shaqada. Ku dhiiro in aad asxaabtaada kula hadasho Finnish ama Iswidhish. Warar dheeraad ah oo ku saabsan barashada luqada ka sii akhri qeybta InfoFinland Luqada Finnishka iyo Iswidishka.
Sinnaanta iyo caddaalada shaqada
Sida uu qabo sharciga Finland, nooc kasta oo takoor ah waa ka mamnuuc goobaha shaqada. Shaqo-bixiyuhu waa in uu ka taxadiraa in cadaaladda iyo sinnaanta jinsiyadu ay ka hirgalaan goobta shaqada.
Wixii macluumaad dheeraad ah ka akhriso bogga InfoFinlandi: Sinnaanta iyo caddaalada shaqada.
Is adeejinta iyo masuuliyad qaadashada
Goobaha shaqada ee Finnishka shaqobixiyuhu marwalba ma koontaroolo shaqo qabashada qof shaqaale ah. Shaqaalaha waxaa la weydiiyaa aragtidood, aragtidoodana waxaa lagu dartaa xisaabta marka shaqada la qorsheynayo.
Sida badan qaybsiga shaqada waxaa looga heshiiyaa shirarka guud wixii lagu heshiiyeyna waa in la fuliyaa. Qofka madaxda ahi wuxuu shaqaalaha u dhiibaa shaqooyinka, qaabkii uu u qaban lahaana waxaa loo daayaa oo go’aan ka qaata qofka shaqaalaha ah. Haddii uu qofku aqoon waayo sidii uu shaqada u qaban lahaa ama uu qaban kari waayo wuxuu si toos ah hagitaan waydiisaan karaa shaqaalaha kale ama madaxdiisa.
Aaminaada iyo dhawrida jadwalka shaqada
Dhaqanka shaqada ee Finnishka waxaa muhiim ah in la ilaaliyo wixii lagu heshiiyey. Haddii waxa la wada go’aansado, shaqaalaha iyo shaqo-bixiyuhuba waxay u qaadanayaan in qof kastaa qabanayo wixii lagu heshiiyey.
Finlad waxaa muhiim ah in la ilaaliyo waqtiga. Shaqada waa in la yimaadaa waqtigii lagu heshiiyey oo go’an. Saacada 8.00 macnaheedu waa 8.00 ee maaha 8.10. Daahidu waa ixtiraam la’aan, sababtoo ah dadka kale waxay ku qasban yihiin inay sugaan qofka soo daahay. Haddii aad og tahay inaad soo daahayso u sii sheeg daahidaada qofka madaxda kuu ah.
Shaqooyin badan ayaa waxay leeyihiin waqti soo gelid shaqo oo u dhaxaysa 7–9 iyo ka bixid shaqo 15–17 inta u dhaxaysa. Haddii shaqadaadu ay sidaan dambe oo kale tahay, qofka shaqaalaha ah asagaa si fiican ugu taxadaraya inuu shaqeeyo waqtigii loogu talogalay oo ku waafaqsan heshiiska shaqada.
Qaabka layskula xiriiro
Finnishku si toos ah ayey u hadlaan, toos u hadliduna maaha xushmad daro. Hadalka tooska ah waa ka caadi goobaha shaqada ee Finnishka. Haddii tusaale ahaan waqtigu uusan ku filnayn in shaqada lagu dhameeyo, waxaa wanaagsan in si toos ah loogu sheego qofka madaxda ah. Shirarka iyo wada tashiyada waxaa si toos ah loo abaaraa ajandaha marka la is nabdeeyo kadib.
Habka la isula hadlo ee dhaqanka shaqada ee Finnishku waa mid aan rasmi aheyn.Goobo shaqo oo badan waxey dhammaan shaqaaluhu isugu yeeraan magaca koowaad iyagoo aan eegeyn derajada.
Saamaynta diintu ay ku leedahay shaqada
Dad badan oo Finnish ah waa Kirishtaan laakiin ma ahan dad aad diinta ugu dheggan. Si kastaba ha ahaatee waxay weli dhaqan ahaan u ilaaliyaad caadooyin diimood faro badan. Saamaynta diintu ay kuleedahay shaqada waxay ka muuqataa fasaxyada shaqaalaha.Maalamaha ciddiha kirishtanka ah, ciida kirismaska iyo ciida kirishtaanka ee maalintii nabi Ciise kor loo qaaday (pääsiäinen) waa ciido sharciga Finlad ku qoran.
Faahfaahin dheeraad ah ka sii aqri bogga InfoFinlandi Xaflad-ciideedyada Finland.
Caadooyinka iyo dhaqamada diiniga ah shaqo kuma leh goobaha shaqaga ee dalkan Finland.Goobaha shaqada qaarkood waxaa laga sameeyaa meelo lagu tukado, haddii shaqaaluhu ay sidaas dalbadaan. Laakiin arin guud ahaaneed maaha. Haddii qofka shaqaalaha ahi doono tusaale ahaan inuu waqtiga shaqada dhexdiisa tukado, waa inuu tukadaa waqtiyada biririfta. Calaamadaha kore oo sheegaya diimaha sida marax daboolida waa la ogol yahay, laakiin waa in la ilaaliyaa sharciga goobta shaqada u yaal dhar xirashada. Tan waxaa sabab u ah sharciyada la xiriira nabadgelyada shaqada iyo fayadhowrka.
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan qiyamyada iyo caadooyinka Finnishka bogga Hab-dhaqanka Finnishka.